ठेकेदारको दादागिरीले गुल्मीमा उच्च जोखिमा वस्ती, अटेरी ठेकेदारको कमजोरीले जिवन मरणको दोसाँधमा वालक – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/ठेकेदारको दादागिरीले गुल्मीमा उच्च जोखिमा वस्ती, अटेरी ठेकेदारको कमजोरीले जिवन मरणको दोसाँधमा वालक
ठेकेदारको दादागिरीले गुल्मीमा उच्च जोखिमा वस्ती, अटेरी ठेकेदारको कमजोरीले जिवन मरणको दोसाँधमा वालक
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ श्रावण ३, बिहीबार १९:०८ मा प्रकाशित
गुल्मी, साउन ३ । रिडी-तम्घास सडक खण्डको रिडी देखि केहि माथी सडक चौडा पार्न ठेकेदारले जस्तो अचाक्ली अन्य ठेकेदारहरुले विरलै गरे होलान् । दादगिरी शैलीमा गत चार महिना देखि सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई समेत अटेरी गर्दै हटलाईन सडक मानिने तानसेन-तम्घास सडक खण्डमा दैनिक ६ घण्टा सम्म डोजर चलाएर जनताको आवत जावत गर्न पाउने अधिकार खोस्दै आएका त्यसका ठेकेदारको पछिल्लो अचेक्लीले झन डर लाग्दो घटना घटेको छ ।
प्रदिप कण्ट्रक्सन रुपन्देहीका ठेकेदार कुन्दन भन्ने लोकबहादुर खत्रीको अचाक्लीले कसैको वास उठ्ने भएको हो भने कसैलाई जिवन मृत्युको दोसाँधमा पारेको हो । उनका कामदार र साईट ईन्जिनियरहरुले जथाभावी डोचर चलाएर छेउँमा माटो थुपारे पछि अविरल वर्षाले त्यो माटो बगाएर तल रिडीका वासीन्दाको घर, गोठ, शौचालय पुरेको छ । रिडीका डम्वरबहादुर थापा, प्रमोदजंग श्रेष्ठ र राधिका अधिकारीका परिवारजन वस्ने रिडी माविको होस्टल बाढी बसेर घर भित्रका सारा सामग्रीको क्षति भएको छ ।
असार २४ गते राती वाढी पसेपछि अर्को दिन गुल्मीका सिडियो यदुनाथ पौड्याल, यहाँका सुरुक्षा निकायका प्रमुख पुगेका थिए । क्षतिपुर्ति दिलाउन र ति वस्तीको जोखिमको अवस्था बुझ्न पुगेका उनिहरुले क्षति त दिलाउने भए तर एकसेएक ईन्जिनियर र सुरक्षा निकायका विज्ञहरुले त्यस वस्तीलाई खतरामुक्त भनेर आए ।
असार २५ गते सम्म डोजर चलाउने त्यस पछि नचलाउने निर्देशन दिएर फर्किएका सिडियोले उनलाई नटेरेर हो वा भनसुन आएर हो । असार ३१ गते सम्म डोजर चलाईदै थियो ।
त्यस दिन विहान साढे ६ वजे देखि डोजर चलाई रहँदा स्थानियहरु ढोका थुनेर चुलोमा काम गर्दै थिए । नचालउन भनेर आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरिदै थियो । असार मशान्तको पैसा सक्न सिडियोलाई समेत अटेर गरे वा उनिबाट पनि छुट पाए ।
भोलीको साउने सक्रान्ति मान्ने चहल पहल घरमा सुरु भई रहँदा विहान अवेर ८ वजेतिर उठेर पिसाव फेर्न शौचालय छिरेका थिए राधिका अधिकारीका १३ वर्षिय छोरा कृर्तार्थ अधिकारीलाई गर्लम्गुलुम ढलेको शौचालयले पु¥यो ।
आमा.. भनेर अर्को पटक चिच्चाए, फेरी आमाले बावु… भनेर चिच्चाईन । एक पटक हजुर.. भने त्यसपछि उनको वोली बन्द भयो । तत्काल रिडीमा प्रथामिक उपचार गराई पाल्पा मिशन अस्पतालले त्यहाँ उपचार सम्भव नभएको भने पछि पाल्पाकै प्रभावस अस्पतालमा पुराईयो । लुम्विनी मेडिकल कलेज प्रभासमा उनि आईसियु कक्षमा जिवन मरणको दोसाँधमा छन । उनको सिटीस्क्यान रिपोर्टमा टाउकोको हड्डी फुटेर ब्रेनमा असर परेको डाक्टरले बताएका छन । तत्काल अप्रेशन गराईए पनि अहिले सम्म उनि अचेत छन ।
छोरा चिच्चाएको स्मरण गर्दै आमाले डाँको छाडिन्
वावु त्यस दिन अवेर त्यस्तै आठ बजे उठ्यो र पिशाव फेनै ट्वाईलेट भित्र पस्यो । छिर्न के पाएको थियो माथीबाट शौचालय ढल्यो । आमा.. भन्दै चिच्चायो । म पनि अत्ताालिदै बाबु.. भने । हजुर.. भन्दै थियो त्यस पछि अहिले सम्म आमा.. भनेर मेरो छोराले भनेको सुनेकी छैन । उनले डाको छाड्दै भनिन त्यही दुई पटक वोलेको आवज कानमा गुञ्जि रहन्छ ।
२५ गते परराष्ट्रमन्त्री , सिडियो, आर्मी पुलिसका ठुला मान्छे र ईञ्जिनियरहरु पनि अघिल्लो क्षतिको अवलोकन गर्न आएका थिए । हाम्रा घर गोठ र शौचालय खतरामुक्त छन । डोजर चलाउन हुन्छ भन्दै गए ।
हामीलाई त्यति ठुला मान्छेहरुले जोखिमा छ है भनि दिएको भए हामी घर छाड्ने थियौं । ट्वाईले प्रयोग पनि गर्ने थिएनौं उनले रुँदै भनिन छोरा जिवनमरणको दोसाँधमा छ । कुनै सरकारी निकायका मान्छेहरु हेर्न आएका छैनन ।
ठेकेदारको चरम लापर्वाही र प्रशासनको हेलचेक्राई
त्यहाँको अवस्था गम्भीर लागेर असार २७ गते जिल्ला प्रशासनमा पुगेर यसै समाचारदाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानकृष्ट गराएको थियो । उनले २५ गते सम्म चलाउन भनेको त्यस पछि रोक्न भनेको बताउँदै थिए । ति वाढी पिडित परिवारलाई कुल क्षतिको ५० प्रतिशत रकम ठेकेदारबाट ब्यहोर्न लगाएर आएको हुँ , उनले भन्दै थिए २५ गते सम्म त भनियो तर बर्षायामको वेला छ बाटो चाँडै सक्छ भने त एका दुई दिन गरोसकी भन्ने लागेको छ ।’
उक्त सडक निर्माणको रेख देख गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पालाई पछिल्लो घटनामा परी घाईते भएका वालकको वारेमा थाहै छैन । डिभिजन प्रमुख ईञ्जिनियर वावुराम सापकोटाको ध्यानाकृष्ट गराउँदा उनले आफुलाई त्यसबारे थाह नभएको बताए । “पछिल्लो घटना त मिलाएर आएका हौं”, उनले भने, “पछिल्लो घटनामा वालक घाईते भएको कुरा मलाई जानकारी नै गराईको छैन ।” ति ठेकेदार र उनका सम्पर्क ब्यक्तिको फोन पटक पटक गर्दा पनि उठाईएको छैन । कति किलोमिटर हो ? कति लागतमा निर्माण हुँदै छ ? यो प्रश्नको जवाफ भने आफुले अफिस नगए सम्म दिन नसक्ने बताए । त्यस्तै तिन करोडमा बन्दै होला , उनले अनुमानित कुरा सुनाए ।
उनकै शव्दमा तिन करोडको हो भने त्यहाँ स्टीमेटको वोर्ड राख्न पर्ने कि नपर्ने ? ठाउँ ठाउँमा खतराको संकेत पनि गरिनु पर्ने कि नपर्ने ? तलबाट भलले खोलेर ढल्नै लागेको त्यो शौचालय २५ गते नै डोजर लगाएर ढलाई दिन पर्ने कि नपर्ने ? त्यस परिवारलाई प्रयोग नगर्नु है भन्न पर्ने कि नपर्ने ? यी गम्भीर प्रश्नको जवाफ अव जनतालाई सरोकारवाला निकायले दिनै पर्छ ।